အမေရိကန် သမ္မတစီးတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ဘာဖြစ်လို့ အလန်းဆုံးလဲ ? | Danya Wadi
»သတင်းများ»အမေရိကန် သမ္မတစီးတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ဘာဖြစ်လို့ အလန်းဆုံးလဲ ?
အမေရိကန် သမ္မတစီးတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ဘာဖြစ်လို့ အလန်းဆုံးလဲ ?
Posted by danyawadi on August 2, 2017 in သတင်းများ
အမေရိကန် သမ္မတတွေအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မှာ အခက်အခဲ မရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ Air Force One လို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ်၊ Marine One လို့ခေါ်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ The Beast လို့ခေါ်တဲ့ ကားတွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာကို အသုံးပြုထား တာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အခု ဒီဆောင်းပါးမှာ အမေရိကန် သမ္မတစီးတဲ့ Ground Force One လို့ခေါ်တဲ့ ဘတ်စ်ကား အကြောင်း တင်ပြသွားပါမယ်။
Ground Force One ဟာ ၄၅ ပေရှည်ပြီး ဒီကားရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကိုတော့ သမ္မတရဲ့ ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ (Secret Service) က သေချာပြင်ဆင် ပါတယ်။
The Beast လို့ခေါ်တဲ့ ကားလိုပဲ ဒီဘတ်စ်ကား တစ်စီးလုံးကို အနက်ရောင် ဆေးခြယ်ထားပါတယ်။
Ground Force One နဲ့ သူနဲ့ ဆင်တူ ကားတစ်စီး ကို တဲနဲဆီပြည်နယ်အခြေစိုက် ဟန်းဖီးလ်ညီအစ်ကိုများ ကုမ္ပဏီကနေ မှာယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်း တန်ကြေးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်ထားတာနဲ့ တန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီကား မဝယ်ခင် အမေရိကန်သမ္မတ ရက်ရှည်ခရီးထွက် ဖို့ ကားအသစ် တစ်စီးငှားရပြီး လုံခြုံရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရတာမို့ အသစ်ဝယ်လိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒီဘတ်စ်ကားဟာ ကားတာယာပေါက်သွားရင်တောင် ဆက်သွားလို့ရနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပြီး ကျည်ကာ သံပြားတွေနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ မှန်တွေနဲ့ ကာထား ပါတယ်။
ဓာတုဗေဒလက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်လာရင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အောက်စီဂျင်ဗူးကိုလည်း ထည့်သွင်းထားတဲ့အပြင် သမ္မတ ရဲ့ သွေးအမျိုးအစား သွေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် တယ်လီဖုန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို အပြင် အင်တာနက်ကိုလည်း ရုံးတစ်ရုံးလို အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
The Beast ကားလိုပဲ သေချာ လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထား တဲ့ ယာဉ်မောင်းအနည်းငယ်ကသာ ဒီကားကို မောင်းနှင် ခွင့်ရှိပြီး ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လူအနည်းငယ်သာ ကားပေါ် တက်စီး ခွင့် ရှိပါတယ်။
Ground Force One ဟာ လူအရောက်အပေါက် နည်း တဲ့ ဒေသတွေမှာ သမ္မတကို သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ လုံလုံခြုံခြုံပို့ပေးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်တွေ အားလုံးကို အနက်ရောင်ပြောင်းထား တဲ့အတွက် လူထုကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင် သမ္မတက ယာဉ်မောင်းရဲ့ ဘေးမှာ ရပ်ရပါတယ်။
Ground Force One ကားထဲမှာ ဘယ်လို ဒီဇိုင်းရှိသလဲ ဆိုတာ မသိရပေမယ့် အိမ်ဖြူတော် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ထိုင်ခုံတွေအပြင် ခုံတန်းရှည် တစ်လုံးလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
သမ္မတဟာ Air Force One ကနေ Ground Force One ကို ချက်ချင်းသွားနိုင်တာမို့ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။
← ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်ခရီးစဉ် စတင် ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင်
ရိုဟင်ဂျာ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း →